Isi dozie olu nke ihe mgbapụta ụgbọala haịdrọlik usoro? - China Qingdao CO-NELE Group
Isi dozie olu nke ihe mgbapụta ụgbọala haịdrọlik usoro?
I. Small mgbapụta ụgbọala Noise si plunger mgbapụta ma ọ bụ moto
(1) mmiri onu bụ otu n'ime ndị isi na-akpatara ndị oké mkpọtụ na haịdrọlik nfuli. Mgbe ikuku agwakọta ghọọ mmanụ, ọ dị mfe ụdị cavitation ya elu nsogbu ebe na mgba n'ụdị nsogbu mmiri na ebili mmiri, na-eme mmanụ oscillate na akpata cavitation mkpọtụ na usoro. Isi ihe mere ndị ahụ bụ:
① The mmanụ nyo nke haịdrọlik mgbapụta nke obere mgbapụta ụgbọala, na mkpọchi nke mmanụ uzo mmiri ọjà, ma ọ bụ mmanụ viscosity dị elu, nwere ike ime ka agụụ na mgbapụta uzo mmiri na-elu, ikwe ikuku banye.
② The obere mmanụ mgbapụta haịdrọlik mgbapụta na pilot mgbapụta aro ọgwụgwụ mmanụ akara na-mebiri emebi, ma ọ bụ mmanụ anwụrụ na-adịghị mma akara, na-eme na ikuku na-abanye.
Mgbe elu mkpọtụ pụtara na ihe mgbapụta ụgbọala haịdrọlik mgbapụta, n'elu akụkụ ga-enyocha ndị mbụ, nsogbu a ga-mesoo na oge.
(3) The haịdrọlik mgbapụta nkesa efere nke obere ihe mgbapụta ụgbọala bụ otu n'ime ihe ndị dị mkpa mmiri na-ewekarị ime ka mkpọtụ. N'ihi elu wear ma ọ bụ sludge ego na mmeghe nke ebutu tank n'oge ojiji, nkesa efere ga-ebelata ebutu tank na-agbanwe ebutu ọnọdụ, n'ihi na mmanụ afia, nke ga-eme ka elu mkpọtụ. Na nkịtị ịrụzi usoro, na nkesa efere rụziri site ewepụghị egweri ga-enwe mmetụta nke shortening na ebutu uzo. N'oge a, ọ bụrụ na ọ na-adịghị kwesịrị ekwesị lengthened na oge, ọ ga-n'ịwa a oké mkpọtụ. N'oge nzukọ usoro, nnukwu ebutu uzo nke nkesa efere ga-arụnyere na-elu-mgbali ulo nke mgbapụta, na nkọ ya n'akuku ga-abụghị ka adiana ntụziaka nke cylinder, ma ọ ga-eme ka ukwuu mkpọtụ ka usoro .
Noise nke enyemaka valvụ
The obere mgbapụta ụgbọala enyemaka valvụ bụ ewekarị elu ugboro mkpọtụ, nke na-tumadi mere site ejighị n'aka arụmọrụ nke pilot valvụ, ya bụ, mkpọtụ mere site elu ugboro oscillation nke mgbali ke n'ihu oghere nke pilot valvụ. Isi ihe mere ndị ahụ bụ:
Air na-agwakọta ke mmanụ, na cavitation a kpụrụ ke n'ihu oghere nke pilot valvụ, nke na-akpata elu ugboro mkpọtụ. N'oge a, iyuzucha ikuku oge ma gbochie n'èzí ikuku si re-abanye.
(2) The agịga valvụ na-ugboro ugboro na-eyi n'ihi Ugboro oghere n'oge ojiji, nke na-eme cone elu nke agịga valvụ na valvụ oche-enweghị ike anya na kọntaktị na onye ọ bụla ọzọ.
(3) The pilot valvụ na mgbali nduzi ọrụ bụ ejighị n'aka n'ihi ike ọgwụgwụ deformation nke mmiri, nke na-akpata nnukwu nsogbu fluctuations na-akpata mkpọtụ. N'oge a, mmiri ga-anọchi.
Nke atọ, nkpọtu nke obere mgbapụta ụgbọala haịdrọlik cylinder
(1) Air a gwakọtara na mmanụ ma ọ bụ ikuku na haịdrọlik cylinder na-kpam kpam, ike agwụ, na cavitation emee n'okpuru ihe nke elu nsogbu, nke na-akpata nnukwu mkpọtụ. Na nke a, iyuzucha ikuku na oge.
(2) The cylinder isi mmanụ akara na-ahụ esika ma ọ bụ ndị pistin mkpanaka kpebisiri, na ọ ga-n'ịwa mkpọtụ n'ihi ọzọ agha n'oge ije. Na nke a, ị ga-eji dochie mmanụ akara ma ọ bụ na-agbatịnụ na pistin mkpanaka ke oge.
Nke anọ, pipeline mkpọtụ
Oké bends nke elu-igwe mgbapụta anwụrụ ma ọ bụ omume rụrụ gwara mkpachị nwekwara ike n'ịwa vibration na ụzụ. Ya mere, nwụrụ anwụ bends kwesịrị ẹse dị ka o kwere na mmetụta dị aṅaa okirikiri nhọrọ ukwuu, na tọpụ clamps ga-tightened na oge.
Post oge: Mar-26-2020